Ndidinga iTrasti? - I-NJ kunye ne-NY yeNdawo yeZindlu kunye nokuThengiswa, ukuKhuselwa kwaBantu abaKhuselayo kunye namaGqwetha okubhunga
ikhaya / Blog / Khetha / Ndidinga iTrasti?
Ukuba ukhe wazibuza ukuba ingaba ufuna ukuthembana okanye hayi, awuwedwa. Zininzi iimbono eziphosakeleyo malunga nokuba kutheni kwaye kutheni wenza ukuthembana. Ke kukho umbuzo wokuba loluphi uhlobo lokuthenjwa endiludingayo? Iyarhoxisa okanye ayinakusebenza? Eli nqaku liza kuzama ukucacisa eminye yale mibuzo kunye nokukhupha ukungaqondani okuqhelekileyo malunga neetrasti.
Yintoni intembelo ephilayo kwaye kufuneka ndiyisebenzise nini?
A ukuthembela okuphilayo kukuthemba okukhoyo ngexesha lobomi bakho, ngokungafaniyo nethemba lesivumelwano elingazange lenzelwe de ube usweleke. Itshintsha ulawulo lomntu oyikhethileyo, iitrasti, ngendlela elula enokuthi ikhubazeke okanye usweleke. Ukuba ixhaswe kakuhle imali iyakhusela nokuhlola. Siza kuxoxa ngethemba lesivumelwano kunye nenkxaso mali efanelekileyo kamva.
Zimbini iintlobo zetrasti ephilayo ezinokuphinda zisebenze kwaye zingenakuchaphazeleka. Bafezekisa iinjongo ezahlukeneyo.
Okokuqala, kukho Ukuphila kwakhona okungathembisiyo, eyona nto isetyenziswa ngokuthembekileyo. Kukho izizathu ezibini eziphambili zokuba abantu bayidibanise kunye. Kuqala, ezi zisetyenziswa ikakhulu ukunqanda ukubekeka. Kwaye okwesibini, bayakuvumela ukuba uguqule ulawulo ngendlela elula enokwenzeka malunga nokukhubazeka okanye ukufa. Ukongeza, babucala ukuba ugcina ngale ndlela, kwaye banokunika ukhuseleko lweasethi kubantu obathandayo emva ukubhubha kwakho, kodwa akuboneleli ngokhuseleko kuwe ngempahla ebomini bakho.
Oku kusilethela ukuthembeka kokuphila okungenakuchaphazeleka, Ziyenziwa ngelixa zihlala kwaye zisetyenziswa KAKHULU ekucwangcisweni kwerhafu kunye nokukhusela iiasethi. Ngokungafaniyo nentembeko ephilayo enokuthenjwa, ukuthembela okuphilayo ngokungenakuguqulwa kukunika ukhuseleko lwezinto zakho ebomini bakho, kunye nakubathandekayo bakho emva kokuba uswelekile. Inokukhusela ii-asethi zakho kumakhaya abalupheleyo, kwizilwanyana ezixhaphaza abanye, ematyaleni, nazo zonke iintlobo zezinye izinto.
Inqaku elinye elibaluleke kakhulu xa usenza i-trust kukuba ufuna ukusebenzisa i-trust endaweni yokonyula abaxhamli. Abanye abantu banazo zombini, ukuthembana kunye nokuchongwa njengomxhamli, akukho sizathu sivakalayo soku, kwaye kunokubangela iingxaki ezininzi kuwe nakwintsapho yakho kwixa elizayo. Nantsi into, ukuba uneeakhawunti zebhanki, ii-401ks, ii-IRA, njl njl., Kwaye unesibonelelo sokuxhamla kwezi akhawunti azizukuhamba ngokwentembeko yakho okanye ukuthanda kwakho, ukubekwa kwabaxhamlayo kuya kulawula nokuba ungayithembi kangakanani utsho.
Ukongeza izibonelelo zokuxhamla azikukhuseli ii-asethi zakho xa abantwana bakho baqhawula umtshato, bemangalelwa, benemikhwa emibi yokuchitha imali, benobudlelwane obubi bemali apho umyeni okanye inkosikazi ihamba ichitha yonke imali, inemicimbi ngokulutha, inamatyala ngokubhanga, bafuna ukhathalelo lwekhaya, okanye abakwazi ukulawula imicimbi yabo, phakathi kwezinye izinto.
Nceda ulumke xa ibhanki yakho okanye umcebisi wakho wezezimali ekuxelela ukuba iziko lakho lokuxhamla lisetwe ngenxa yokuba ubizo lwakho aluzi kukukhusela kwezi zinto zikhankanywe ngentla apha kwaye ezi zizinto ofuna ukukhuselwa kuzo. Oku kunokufezekiswa kuphela ngentembeko exhaswa ngokufanelekileyo.
Kuthetha ukuthini ukuxhasa ngemali i-trust?
Ukuxhasa ngemali ukuthembana yinkqubo yokuhambisa iiasethi zakho kwi trust. Cinga ukuthembela njengesitya esingenanto seziqhamo, kunye nempahla yakho njengeeorenji, iiapile, iibhanana, njl.njl. Kuya kufuneka uthathe iziqhamo ezohlukeneyo kwaye uzihambise kwisitya. Baza kuqhubeka beyisiqhamo esinye emva kokuba ubashukumisile, kodwa ngoku bakwi trust / isitya sakho.
Intembeko engasetyenziswanga ayilifanelanga iphepha elibhalwe kulo. Unalo nje uxwebhu olusemthethweni olubizayo olungakwenzeli nto. Kwakhona, yiqonde into yokuba xa ukuthembela kwakho kungaxhaswanga amaxesha amaninzi ukuba oku kuthetha ntoni ukuba uza kuphelela kwi-probate, kunjalo. Ke isizathu sokuba usethe i-trust ayizukwenzeka. Intembeko yakho ayizukubakho kwaye ayizukukhusela ii-asethi zakho kwizinto ezinokubakho.
Okokugqibela, kukho into ebizwa ngokuba “kukuFa” iTrasti okanye iTrasti yeTestamente. Ezi ziitrasti zenziwe kumyolelo ongekhoyo ebomini bakho, kwaye oko akuthi kuguqulwe kulawulo lweeasethi kwimeko yokhubazeko, kwaye kuyakufuna ukuba (inkundla) iqhubeke.
Lazaro Cardenas, Esq. liqabane ePatel, uSoltis naseCardenas neeofisi eziseJersey City naseHackensack. Ugxile kumthetho weTrasti kunye neeNdawo. Ngolwazi oluthe kratya okanye ukuseta uthethwano nceda undwendwele www.Focuselaw.com, thumela i-imeyili apha [Imeyile ikhuselwe] okanye usitsalele umnxeba ku 844.533.3367. Njengawo nawuphi na umcimbi wezomthetho, iseti yomntu ngamnye yezahluka kwaye eli nqaku alenzelwe ukunikezela ngengcebiso yezomthetho ngemeko yakho ethile, kodwa ukubonelela ngamagqwetha okholosa.
Ukucwangciswa kweNew Estate Estate kungaphezulu nje kweerhafu
Imiba yesikhalazo ukuze iqaphele ngaphambi kokuCombulula ukuTyhilwa koRhwebo eNew Jersey